Qalinkii Degmo’ Xuduuda Somaliland Waxay La Mid Tahay Xuduudaha Kale Ee Africa | Marsa News
Qalinkii Degmo’ Xuduuda Somaliland Waxay La Mid Tahay Xuduudaha Kale Ee Africa
Hargaisa:(Marsanews) Qoraa Degmo oo sida caadada ah badiyaa ka faaloota hadba arimaha waaqiciga ah ee taagan ayaa qoraal ay kaga hadlayso muranka madhalayska ah ee maamulada somaliya ku diidan yihiin xuduud taariikheedkii gayiga somalida uu gumaystayaashii kala duwanaa u sameeyeen ayaa qoraalkan ku cabirtay aragti togan oo xeel-dheeri cilmiyaysani ka muuqato kuna hogatusaalaynaysa dadkan mugdigu kaga jiro xaqiiqda xuduudaha africa, waxaanay qoraalkeeda ku bilawday sidan:
Xududaha Africa waxa wada dhigay gumaystayaashii reer yurub Wallow ay kalA qaybiyeen dadyow isku af , dhaqan , diin iyo qabaail ah Hadana waxa lagama maarman noqoty in la tixgaliya waayo waxay noqden qaar dhaqan galay O anay cidina ku gulaysan wax ka bedelkeda ilaa hada.
Marka taa laga yimaado somalida ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka gumaystuhu kala qaybiyay Una kala sameyay xuduudaha waxana xusid mudan in shanta somaliyed ee hada jeer lagu tiraabaa ay ka timid shanti qaybod ee uu ukala jar gumaystuhu somalida Wallow 2 ka mida lagu daray wadama kale halka 3di kale ay si kala gara ugumaysten 3 gumayste oo kale duwan lona sameyay mid kasta xududud gaara o caalamiya,iyadon lokala egayn qabailkoda balse degaankoda Si kastaba ahate Somaliland aya ka mid ahayd 3 da dal ee somalida ee gumaystuhu usameyay xuduuda gaarka ah xiliga Waxase arin ad lola yaabo noqotay in la maqlo sanadihii an so dhafnay ilaa hada dadyow donaya inay ku gafaan xududihi caalamiga ahaa iyago so huwanaya mara qabil.
halgan dher o wakhti qaatay ka dib marki afriki ka xorowdayday gumaysigii Ee wadan kasta dib u helay xoriyadisii ,somalida ay iyaguna ka mid aha dadyowgi qaatay xoriyadoda xiliyo kala duwan .
Dadka reer Somaliland oo le taarikh fac wayn o aynan halkan ku so kobi karayn ayan can ku aha Somalinimo jacaylku aya hindisahodu ahaa in somalidii gumaystuhu kala qaybqaybiyay ay dib umidoban isla markana ay samaystan Dawlad qudha o ka dhaxaysa Wana ta keentay inay goaamiyan in maalintay xoriyada qaatan ay la midoban walaahodi talyanigu gumaysanayay si bilaa shuruda.
Si taa ay u xaqijiyana waxay shacabka Somaliland ku qasben madaxdodi inay si degdega o bila shuruda ugu biiran somalidi talyanigu gamaystay Si halka loga si amba qaado isku keenida somalida odhan Waxase iyagu fikir ta ka duwan qabay madaxdi Somaliland ee xiliga iyo dawladi ingiriiska ee gumaysatay Somaliland talana ku bixiyay inan lagu degdegin midowga labada dawladod Cagtana lo dhigo xoriyada la qaatay.
Si kastaba ha ahaate labadi dawladoda ee somali Italy iyo british Somaliland la isku dar Iayadon wax shuruda la kala dhigan Wallow anay somalidi talyanigu gumaysan jiray anay la dhacsanayn isla markana wax micne ahna aanay u arkayn midowga aadna ula yaabanayen dadki rer Somaliland ee jibada somalinimadu sidatay iyagoo ubixiyay magaca SOMALI-QALDAN o ay ula jeeden Waxay la so qaldamen xoriyadodi. Dawladi la dhisay midowgi ka dib o saamigii Somaliland ku lahayd la duudsiyay Isla markana madaxdi ugu saraysay sida m/waynihi iyo raisalwasarihiba aan midna la siin Si kasta wax ha ujireene wali mayniyad jabin dadkii reer somaliland waxayna ku dadaalen dawlada dambe ee la dhiso in ay ka helaan saamigii ay xaqa u lahaayen iyago mujinaya niyad wanaag iyo Samir.
Dawladi dambe ee la dhisay ayay heleen raysalwasare, hase yeeshe taasi waxay sababtay in m/waynihi la dilo raysal-wasarihina xabsi dheer lo taxaabo isla markana Dawladi la inqilabo laguna qabsado afgambi military si kastaba ha ahaate dadki reer Somaliland wali waxay sii wadeen hadafkodi ahaa isku ururinta somalida kala maqan iyo isku soo dhawanshaha inti wada jogtay.
Waxayse riyadi midowgi shanta somaliyeed soo gabagabeyay marki somalilidi fransiisku gumaysanyay halgan dheer oo lo galay sidii gumaysiga looga kicin lahaa ay si lama filana ugu dhaqaaqen inay dhisanaya dawlad gaara halki laga filayay inay ku soo biiran labadii hore, ka dib markay arkeen Sida xaalku yahay iyo sida Somaliland ti midowga kentay lola dhaqmayo.
Sidaa si lamida waxa Iyana so gabagabowday riyadii lagu soo xoraynayay somalidi itobia iyo somalidi kenya iyago caalamku shegay inan xuduudii gumaystuhu dhigay aan la bedalin Karin.
Isku soo wada duubo waxa bilaabmay tacadigi uu u gaysanyay kaligii talyihii siyad bare dadka reer Somaliland ka soo jeeda.
Ugu horaynba wuxu dhagta dhiga u daray boqol ku dhawd sarkiila o u ka cabsi qabay Inay ka hor yimadan taliskisi macangaga ahaa. Si kastaba ha ahaate waxa iska so daba dhacayay xasuuqii, dhacii, kufsigii, boobki, jidhdilki Iyo jeel u taxabidii lagu bar-tilmamedsanyay shacabka Somaliland .
Wana sababti kentay inu aasasmo ururki xaqu dirirka aha ee SNM o halgan dher o qadhadh Ka dib ku gulaystay dib u xorayntii Somaliland kuna fashiliyay maamulki kalitaliyihi.
Guntii iyo gabagabadi waxay shacabki Somaliland oo 1960 hore ugu qasbay Madaxdodi midowgi adhaxda lagaga jabay ay mar labad ku qabsaben madaxdodi in laga noqdo Midowga goonina ay isku taagto Somaliland sidi Djibouti waxana lagu dhawaqay jamhuriyad Lagumagabo jamhuriyada Somaliland o wadata xududihi ay lahayd midowga ka hor. Marki sidsi dhacdayna waxayay ubixiyen somalidu dadki rer Somaliland 1991 SOMALI-DIID Halki ay hore ugu bixiyen 1960 SOMALI-QALDAN bal adba !!!!!???? Ugu dambayntii waxan ku so afmeerayaa qormadan 1.Xududa smaliland waxay la mid yihin xudud kale ee somalida iyo Africa inteda kale uu udhigay gumaystihi 2. qabiil wa la wadaagi karaa lakin dhul lama wadaagi karo 3.somaliland goni isu taageda iyo xuduudahedu wa muqadas wana lama taabtan Wayna difacanaysaa.